Njem njem njem njem Sygic Travel | Otu Di na Nwunye
Mpaghara kachasị mma nke njem njem bụkwa ihe kachasị njọ - na-eme atụmatụ njem ahụ n'ezie. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na teknụzụ ndị na-ekwu na ha n'ezie mechie usoro atụmatụ, ọ bụ naanị otu anyị hụrụ na ọ na-eme ya - Sygic Travel Planner.
Nke kacha mma? Ị nwere ike ime ihe a niile na a mobile ngwaọrụ.
Anyị enweghi obi uto banyere Syner Travel Planner, dịka ụzọ na-enweghị isi na ụzọ dị mfe isi mepụta ụlọ ọrụ ahaziri iche na-enweghị mkpa nchọpụta, na-etinye ọtụtụ awa na-agụ nyocha na weebụsaịtị dị iche iche, na-anwa ikpebi oge ole njem ụfọdụ ga-ewe, na n'ikpeazụ ikpebi ihe ndị a ịchọrọ ime.
Enwere ike ịchọta njem nlekọta njem njem Sygic na Android na Store iTunes App, dị mfe ibudata ma dị mfe iji. Kedu ihe dị mfe? Ọ dị mfe iji zere niile nyocha ahụ ma nwee njem ọhụụ zuru ezu n'ime n'ime nkeji. Ị nwere ike iji ụzọ nhazi tupu ịmepụta ya, ma ọ bụ jiri nwayọọ na-emepụta onwe gị site n'iji njigide ha - nke ọ bụla bụ free ozugbo ibudatara ngwa ahụ.
Njem njem Sygic enyere gị aka ịmepụta usoro ihe ndị a n'ụzọ dị mfe site na-agbakwụnye ụzọ dị mkpirikpi na oge njem, na-atụ aro hotels na njem ndị dabara na njem ị chọrọ. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịga na weebụsaịtị ha ozugbo map.sygic.com, ngwa ahụ bụ n'ezie ihe niile ị chọrọ iji gaa.
Ịmalite dị mfe. Ozugbo ibudatara ngwa ma mepee ya, a ga-akpọrọ gị na ntinye ntinye na-arịọ gị ka ịmalite njem gị. Enwere ihe menu na aka ekpe na ihe omuma profaịlụ gị, gụnyere ike igodo GPS site n'ebe ọ bụla ị nọ (ọ gakwaghị efuna efu!), Yana ederede offline nke ebutere ya ka ha wee rụọ ọrụ ọbụlagodi mgbe ị nwere ọrụ . Anyị na-anọ na Yucatan Peninsula ugboro ole na ole, ọ gaara ejikwala ya mee ihe!
Ihuenyo na-esote na aka ekpe gosiri ndokwa na njem, njem ị gara n'oge gara aga, na-enye gị ohere ịleleghachi usoro ihe nkiri dị iche iche, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi otu. Nanị pịa bọtịnụ "gbakwunyere" iji malite.
Nke a bụ akụkụ ntụrụndụ - ịhazi njem ahụ! Nanị tinye na obodo ị na-achọ. Na nke a, anyị ga-egosi gị otu esi eme atụmatụ ụbọchị ole na ole na London, England.
Maka ọtụtụ obodo, ị ga-ahụ na ị na-ahụ ụzọ ntanetị nke ndị ọrụ ibe gị debere. Ị nwere ike ịme ihe ndị a dị ka ị chọrọ dabere na ogologo njem (ebe ọ bụla n'etiti otu ụbọchị na ọtụtụ izu). Otú ọ dị, ị nwere ike ịhọrọ bọtịnụ n'elu ma malite site na ntụgharị ụzọ nke aka gị. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi jiri ya mee ihe, anyị ga-agba ọsọ site na otu isi ihe atụ nke otu a si arụ ọrụ.
Ozugbo ịhọrọla nhọrọ iji mee ka ọ ghara ịcha, ị ga-abịa na ngebichi na obere ozi iji jupụta. Nke a na-agụnye oge ezumike ị ga-anọ, ebe ị ga-abịa London (ma ọ bụ ebe ọbụla ị nọ), yana ịchọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ! Nanị pịa onye ọ bụla ubi iji dezie.
Họrọ ebe ị bịarutere ...
Ebee ka ị ga-achọ ịnọ ...
Na, ọ na-akpaghị aka banye n'ime njem ị na-ewu. Ugbu a, ghọta na site na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, ị nwere ike ịbanye n'ime hotels dị iche iche, lee nlele, hụ ma ọ bụ ebe ịchọrọ ịnọ.
Na ụbọchị ndị dị n'ime ya, nke a bụ otú ụzọ isi gị ga-esi malite.
Ugbu a, họrọ "Mepụta njem" iji malite itinye ya niile na njem!
A ga-akpọrọ gị na ihuenyo ọhụrụ na map nke obodo ahụ, ebe dịgasị iche iche, njegharị (nke gụnyere ịgụ akwụkwọ), mgbazinye ụgbọ ala, yana map nke obodo na njem ụgbọ njem dịka London Tube.
Enwere ọbụna MAP nke London Tube System na ngwa ahụ!
Ị nwere ike ịbanye n'ime map nke obodo ahụ site n'iji mkpịsị aka abụọ mee ihe iji abanye n'ime. Ị nwere ike ịchọta na ebe dị nso na ụlọ nkwari akụ ị họọrọ ka ị nwee ike ịchọta ihe ị ga-emeli! Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhụ ụlọ ahịa ndị dị nso, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ n'ime ama ama London.
Mgbe ị hụrụ ihe ịchọrọ ịgbakwunye njem ahụ, ọ ga-enye gị echiche n'ozuzu banyere oge ole ọ na-ewe iji gaa. Na nke a, enwere ike ịhụ Big Ben na naanị ihe dị ka 15 nkeji, dịka ọ pụtara site na ogwe anụnụ anụnụ.
Họrọ ụbọchị ịchọrọ ịgbakwunye njem ...
Na, ugbu a ị na-enwe nhazi nke nhazi ọ bụla!
Ị nwere ike ịnọgide na-agbakwunye mpempe akwụkwọ na njem ọ bụla kwa ụbọchị, nweekwa ozugbo eme atụmatụ nke oge ole ị ga-etinye ego na njem maka ụbọchị ahụ. Nọgide na-ewu site n'ịgbakwụnye, ruo mgbe ị gbakwunyere ihe niile ịchọrọ itinye.
Ma ọ bụghị ya, ị nwekwara ike iji njem eji wuo ya, dịka ihe atụ a nke "Best London na One Day". Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a na-agụnye ebe 19, na-ewe ihe dịka 10, ma na-agụnye ndepụta nke njem niile - dịka Tower Bridge, Tower of London, Tower Hill, na Mansion House.
Na ngwa ahụ, ịnwekwara ike iji nlegharị anya vidio nke obodo ahụ mmekọrịta, ma jiri aka gị gaa. Nke a na-enye gị nlele 360 nlele obodo ahụ site na njem ọ bụla ma ọ bụ akara ngosi!
Ozugbo ị mechara, naanị zọpụta njem gị na ibudata ma ọ bụ ịkekọrịta na ndị enyi gị na ndị enyi ibe gị!
Ihe niile dị na ya, na n'ime nkeji ị nwere ike ịme njem nke aka gị n'ebe ị na-anọbeghị, ọtụtụ puku kilomita ole na ole. Enweghị ego eji eme njem na njem ọnụ, ọ bụghị ọrụ nyocha na-adịghị agwụ agwụ, nanị njem dị ọcha!
Category: Ebe nkiri ebe nkiri, Nyocha, Technology, Transportation, Njem Gear, Nhazi njem Tags: london, njem sygic, technology, atụmatụ njem
← Chicken Anụmanụ
Ụgbọ mmiri kacha mma na San Francisco →